यही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ) - Taja Report
Homeमनोरंजनयही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ)
यही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ)
June 30, 2018 मनोरंजन Comments Off on यही हो नेपालको स्वर्ग जहाँ पुगेपछी पर्यटक छाती पिटेर रुने गर्दछन् ! (मर्नु अघी घुम्नै पर्ने ठाउ)
पर्यटन क्षेत्रको विकास गरे नेपाल गरिब मुलुक नहुने : उपप्रधानमन्त्री यादव
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मुुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउने हो भने पर्यटन व्यवसायको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय पर्यटन मञ्चले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायिक विकास गर्न सके नेपाल गरिब मुलुक नरहने बताएका हुन् ।
योजना, व्यवस्थापन र राजनीतिक चिन्तनको अभावका कारण मुलुकले विकास र सम्वृद्धिको बाटो लिन नसकेको भन्दै उनले कमिशन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले शासन सत्तामा एउटै वर्गको बर्चश्व भएका कारण मुलुक पछाडि धकेलिएको दाबी गरे । उनले समानता, सामाजिक न्याय र विविधतामा एकतामा आधारित समाजको निर्माण गर्न सक्ने हो भने नेपाल संसारकै नमूना देश बन्न सक्ने ठोकुवा गरे ।
संघीय पर्यटन मञ्च उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादी फोरम सम्बद्ध भात्तृ संगठन हो ।
दादको समस्या बाट ७ दिनमै गायव गर्ने घरेलु औषधी
धामीले सिंगो बस्तीका सवैको मृत्यु तोकिदिएपछि… हाम्रै नेपालमा यस्तो सम्म भयो